Shan qof oo burcadbadeed Soomaaliyeed ah oo ku dhaawacmay weerar iska caabin ah oo ay saameeyeen ciidamada badda Midowga Yurub – Radio Daljir
Janaayo 13, 2012 12:00 b 0
EU,Jan 13 -Ciidamada badda Midowga Yurub ee holwgalka la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda u jooga xeebaha Soomaaliya ayaa qabqabtay lix nin oo burcadbadeed Soomaaliyeed ah.
Howlgalkan ayaa yimid kadib markii kooxaha burcadbadeedu ay weerareen mid ka mid ah maraakiibta dagaalka Midowga Yurub oo laga leeyahay dalka Spain.
Warqoraal ah oo ay soo saareen ciidamada badda Spain ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda,ayaa waxaa lagu sheegay lixda qof ee lala xiriirinayo fal-dambiyeedka burcadbadeednimo shan ka mid ah ay ku dhaawacmeen howlgalka ayna heleen daawayn caafimaad oo dhamaystiran.
“Kooxaha loogu shakisanyahay burcadbadeeda waxaa ay rasaas kusoo fureen markabka dagaal ee Patino,iyagoo isku dayaaya inay dusha sare ee markabka soo fuulaan,ciidamada ayaa iska caabin xoog ah ku sameeyey burcadbadeeda iyadoo la adeegsanayo diyaarado hellicopter ah”sidaasi waxaa lagu yiri qoraal kasoo baxay ciidamada Midowga Yurub.
Kooxha burcadbadeeda ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay kordhiyay weerarada ay ku bar-tilmaameedsanayaan maraakiibta xamuulka qaada ee adeegsada biyaha Soomaliya iyo kuwa caalamka.
Dadka wadanka Tunisia oo maanta xusaya markii uu xukunka dalkaasi iskaga cararay Zine Caabdiin Ben Cali